macruufka 15 ayaa macsalaameynaya kaararka socdaalka iyo dhacdooyinka dhacay Wallet | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | | macruufka 15
Qarnigii XXI, oo leh dhammaan kaararka deynta, fuula, tigidhada filimada, tigidhada shirweynaha, iwm. waxay noqotay wax iska caadi ah. Si loo damaanad qaado kala dambaynta dhammaan macluumaadkaas, Apple ayaa abuurtay barnaamijka Salada dhowr sano ka hor iyadoo ujeedadu tahay ku kaydi dhammaan kaararka iyo kaararka hal meel ku habboonaanta isticmaalaha. Laakiin sida barnaamijyo badan oo ku saabsan iOS, dib looma cusbooneysiin sannadihii la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, imaatinka macruufka 15 Apple wuxuu xalliyay mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee ka jiray barnaamijkan: bandhigga hore ee kaararka dhacdooyinka hore. IOS 15 waxay u ogolaaneysaa in si otomaatig ah loo qariyo.
Wallet wuxuu qarin doonaa safarka dhacay iyo dhacdooyinka kudhaca iOS 15 si otomaatig ah
Wallet-ka waxaad kuheleysaa amaah, kaarar iyo kaararka lacag bixinta, kaararka xubinnimada iyo kuwa daacadnimada, kaararka lagu raaco, tikidhada, rasiidhada, kaararka ardayda, iwm.
Shandad ayaa lagu keydin jiray kaararka lagu raaco, tikidhada iyo noocyada kale ee aqoonsiga gelitaanka. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo kaararkaas ah waa dhacay sababtoo ah dhacdadu way dhacday ama sababtoo ah waxaan horey u isticmaalnay. Si looga dhigo inay ka baabi'iyaan barnaamijka waxay ahayd lagama maarmaan in la tirtiro mid mid mararka qaarna waxay ahayd shaqo dhib badan.
Imaatinka macruufka 15 wuxuu joojiyay dhibaatadan adoo kudaray ikhtiyaarka: Qari kaararka dhacay '. Taasi waa, adoo ku kicinaya ikhtiyaarkan markay dhacdooyinka dhacaan oo kaararku dhacayo, mar dambe laguma arki doono shaashadda weyn ee Wallet. Haa runtii, si joogto ah looma tirtiro, ku dhaafida dhamaan baasaskii dhacay waqtigii loogu talagay barnaamijka si loogu xafido.
Sida laga soo xigtay horumariyaasha, Koodhka macruufka 15 ayaa tilmaamaya hal ikhtiyaar oo dheeri ah inkasta oo aan weli la sii deyn. Doorashadan ayaa ogolaan lahayd tirtir baasas badan hal mar. Taasi waa, waxaan si joogto ah u tirtiri karnaa dhowr kaar halkii aan mid mid ugu socon lahayn sida aan maanta ula soconno macruufka 14. Waxaan arki doonaa haddii shaqooyinkan ugu dambeyn lagu soo bandhigo nooca ugu dambeeya iyo saameynta ay ku leeyihiin isticmaalka barnaamijka ee isticmaalaha isticmaal maalin kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » IOS 15 waxay macsalaameyneysaa kaararka socdaalka iyo dhacdooyinka dhacay Wallet